इतिहासका पानाबाट – MySansar
Category: इतिहासका पानाबाट
Posted on February 2, 2022 February 1, 2022 by Salokya
२०६१ सालमा आजैको दिन (माघ १९) मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरी सत्ता तीन वर्षका लागि आफ्नै हातमा लिने घोषणा गर्दा परिस्थिति सामान्य थिएन। घोषणालगत्तै ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल फोनका साथै इन्टरनेट सम्पर्क पनि विच्छेद गरिएको थियो। प्रिपेड मोबाइल त महिनौँसम्म बन्द नै रहे। विमानस्थल पनि बन्द गरिएको थियो। केबल टिभी… Continue reading
Posted on July 30, 2021 July 30, 2021 by Salokya
हामी अजर, अमर छैनौँ। हामी सबैलाई थाहा छ- एक दिन मर्नै पर्छ। तर यो सत्यलाई बिर्सन्छौँ र नमरेसम्म एकोहोरो दौडेको दौडेकै गर्छौँ। मृत्यु कसले देखेको छ र, हामी अहिले नै मृत्युको नजिक नहौँला। तर मृत्यु नजिकिएपछि, मृत्यु निश्चित भएपछि मानिसहरु के सोच्दा रहेछन् त? बोन्नी वेयरले धेरै वर्ष त्यसरी मृत्यु नजिक भएकाहरुको हेरविचार गर्ने काम… Continue reading
Posted on June 2, 2021 by Salokya
२० वर्षअघि दरबार हत्याकान्ड हुँदा पारस श्री ५ शाहज्यादा थिए अनि हिमानी श्री ५ शाहज्यादी। हत्याकान्डपछि उनका बुबा ज्ञानेन्द्र श्री ५ महाराजधिराज भए। आमा कोमल बडामहारानी भइन्। तर उनीहरुलाई युवराज/युवराज्ञी घोषणा गर्न भने दशैँसम्म कुर्नुपर्‍यो। देशमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि दुवै पूर्व युवराज/युवराज्ञी भएका छन्। २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा हत्याकान्ड हुँदा दुवै घटनास्थलमा थिए।… Continue reading
दिल्लीमा पाँच बूँदे सहमति हुँदै गर्दा मलाई राजा मान्ने कि ज्ञानेन्द्रलाई बहस : त्रिभुवनको आत्मकथा
(आज फागुन ७। प्रजातन्त्र दिवस। राजा र नागरिक मिलेर राणा शासनलाई ढालेर प्रजातन्त्र ल्याएको दिन। प्रजातन्त्रका लागि के कस्ता कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो भन्ने बारे एसपी आसाले त्रिभुवनको आत्मकथा शैलीमा उपन्यास लेखेका थिए- ‘हामीले कसरी प्रजातन्त्र ल्यायौं’। त्यसैको एक अंश) २००७ साल माघ १८ गते काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन भएछ। धेरै मानिस समातिएछन्। ‘निरंकुश राणा शासन… Continue reading
२००७ साल कात्तिक २२ गते राजा त्रिभुवन नारायणहिटी दरबारबाट भागेर भारतीय दूतावासमा शरण लिँदादेखि दिल्ली भगाउँदासम्म भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग थियो। विमानस्थलसमेत नभएको काठमाडौँबाट राजालाई भारत भगाउनु सहज थिएन। यो ‘षड्यन्त्र’ मा सहभागी अनेक पात्रमध्ये बीएल शर्माले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएका छन्- राजा भगाउन विमानस्थल निर्माण त्यतिबेला नेपालमा जहाज चलेको थिएन। राजालाई कसरी भारत पठाउने… Continue reading
गंगालाललाई गोली ठोक्ने आदेश पाएका व्यक्ति उल्टै क्वाँ-क्वाँ रोएर भागेको त्यो क्षण
Posted on February 2, 2021 February 2, 2021 by mysansar
प्रतिगमनको विरोध गरिरहेको नागरिक आन्दोलनले आज शोभा भगवतीमा कार्यक्रम गर्दैछ। अहिले त नेपालमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइँदैन। तर विक्रम संवत् १९९७ मा त्यहाँ दुई जना व्यक्तिलाई शहीद बनाइएको थियो। हिले शहिद सप्ताह मनाइँदैछ नेपालमा। त्यसो त अहिले शहिदहरु थुप्रै भइसके। तर शहिद भन्ने बित्तिकै धेरैलाई याद आउने चार जनामा उही दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त… Continue reading
म्यान्मार आज जे भयो, १६ वर्षअघि नेपालमा त्यस्तै भएको थियो : सुन्नुस् राजाले ‘कू’ गरेको ऐतिहासिक दिनको समाचार
Posted on February 1, 2021 February 1, 2021 by Salokya
म्यान्मारमा आज सेनाले कू गरेको छ। जन निर्वाचित सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मन्त्री सबै नियन्त्रणमा छन्। राजधानी र प्रमुख शहरका संचार सम्पर्क विच्छेद गरियो। ठ्याक्कै यस्तै कदम १६ वर्षअघि आजैको दिन (माघ १९- फेब्रुअरी १) हामीले भोगेका थियौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरी सत्ता तीन वर्षका लागि आफ्नै हातमा लिने घोषणा… Continue reading
Posted on January 31, 2021 February 1, 2021 by mysansar
आज काठमाडौँको सिफलमा नागरिक आन्दोलनका क्रममा कार्यक्रम हुँदैछ। अहिले त नेपालमा कसैलाई पनि फाँसी दिइँदैन। तर विक्रम संवत् १९९७ मा त्यहाँको एउटा रुखमा एक जनालाई झुण्ड्याएर मारिएको थियो। उनलाई अहिले हामी शहिद धर्मभक्त माथेमाको नामले चिन्छौँ। अहिले शहिद सप्ताह मनाइँदैछ नेपालमा। त्यसो त अहिले शहिदहरु थुप्रै भइसके। तर शहिद भन्ने बित्तिकै धेरैलाई याद आउने चार… Continue reading
आज काठमाडौँको टेकुमा ८० वर्ष पुरानो इतिहास दोहोर्‍याइयो। नागरिक आन्दोलनका क्रममा नाट्यकर्मीहरुले यो इतिहास दोहोर्‍याएका थिए। अहिले त नेपालमा कसैलाई पनि फाँसी दिइँदैन। तर विक्रम संवत् १९९७ मा त्यहाँको एउटा रुखमा एक जनालाई झुण्ड्याएर मारिएको थियो। उनलाई अहिले हामी शहिद शुक्रराज शास्त्रीको नामले चिन्छौँ उनको नाम शुक्रराज जोशी थियो। संस्कृत भाषामा शास्त्री उत्तीर्ण गरेकाले उनलाई… Continue reading
मिति : पुस १ गते, २०१७ साल। स्थान : थापाथली। कार्यक्रम : तरुण दलको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन। कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा अचानक हतियारधारी सैनिकको प्रवेश कार्यक्रम स्थलमा हुन्छ। लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह र बिग्रेडियर जनरल समराज कुँवरको नेतृत्वमा कार्यक्रम स्थललाई सैनिकहरुले घेर्छन्। दुई तिहाई बहुमत जितेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालासहित मन्त्रीहरु घेराबन्दीमा परिसकेका थिए। सेनाको… Continue reading
—दधि अधिकारी— ** भरखरै मात्र नर्वेमा एक भारतीय दम्पत्तिलाई डेढ बर्षको काराबासको सजाय सुनाईयो । उनीहरुमाथि आफ्नो सात बर्षको बच्चालाई घरमा पढाऊँदा यातना दिएको अभियोग लागेको थियो । हाम्रो देश लगायत करिब करिब संपुर्ण एसिया र अफ्रिकामा बच्चाहरुलाई पढाऊँदा दिइने सजाय सामान्य नै मानिन्छ । ** आकासबाट खस्ने उल्का पिण्ड लगायत अन्य आकाशीय पिण्डहरु खस्दा… Continue reading
आफुले आफुलाइ हानी गर्न पाउने कि नपाउने ?
Posted on March 9, 2020 March 1, 2020 by mysansar
-डा.डोलेश्वर भण्डारी- हत्या, अपहरण, चोरी, डाका, छलकपट, भ्रष्टाचार जस्ता अपराधी कृयाकलापले अरुलाइ हानी पुर्याएको हुन्छन् र सभ्य समाजमा यस्ता अपराधिहरुलाइ दण्ड दिइन्छ । जुनसुकै समाजको पनि जीउधनको सुरक्षा गर्ने र शान्ती स्थापना गर्ने पहिलो लक्ष हुन्छ । नेपालमा भने अरुले अरुलाई दुख दिने माथी भनिएका अपराधका घटना नै फालाफाल घटिराखेका छन् । यीनलाइ नियन्त्रण गर्न… Continue reading
-डोलेश्वर भण्डारी- ‘गुरु तेरो लुगामा धुलो लाग्नुभयो’ भनेर मखबहादुर लिम्वुले स्कुलका गुरुलाई सजग गराउन खोज्दा भनेको कुराले उनलाई बूढो भइन्जेल पनि नेपाली बोल्नेहरुले गिज्याउन छाडेनन्। यो घटना थियो तेह्रथुमको एउटा लिम्वु गाउँको। यस्तो गिज्याइ खानेहरु नेपालको पूर्वका राई, लिम्वुदेखि लिएर तराईका मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु भाषामा बोलचाल गर्ने मधेशीहरु, पहाडतिरका तामाङ, शेर्पा, गुरुङहरु सबै छन्।… Continue reading
Posted on March 4, 2020 March 1, 2020 by mysansar
-प्रदीप नेपाल- यहाँ वासिंगटनमा बसेको छ, कमाएको र खाएको छ अनि नेपालको बारेमा नचाहिंदो कचरपचर गरेको छ। जे गरेका छन् नेपालीले नेपालमा, त्यसको फल उनीहरुले बेहोरिरहेका छन्। त्यहाँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने डरले अमेरिका भासिएका मानिसले बेकारमा किन पचास खालको टिप्पणी गर्नु हँ? फर्किएर नेपाल जाने, त्यहाँको ढुङ्गा माटोसँग खुरी खेल्ने पनि होइन, यहाँको गाडीमा सुइंकिएर अर्थ… Continue reading
Posted on December 17, 2019 by Salokya
Posted on December 3, 2019 December 3, 2019 by Salokya
हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने बाराको गढिमाई मेला यो वर्ष जारी छ। मेलाको मुख्य दिन मंगलबार राँगाको बलि दिइयो भने बुधबार हाँस, परेवा आदिको दिइन्छ। पाँच वर्ष अघि हामी यो मेलाको रिपोर्टिङका लागि पुगेका थियौँ। त्यतिबेला लेखेको ब्लग- गढिमाई मेलामा प्रहरी र प्रशासनको नालायकी देख्दा निकै दुःख लाग्यो। यो पहिलो पटक भएको मेला थिएन। हरेक पाँच… Continue reading
१५ वर्ष अघि काठमाडौँ जलेको त्यो दिन
Posted on September 2, 2019 September 2, 2019 by Salokya
१५ वर्षअगाडि (२०६१ भदौ १६ मा) आज कै दिन काठमाडौं निकै तनावग्रस्त थियो। सिङ्गो काठमाडौं जलेको थियो। इराकमा नेपाली दाजुभाइ मारिएका कारण आक्रोशित जनसाधारण सडकमा उत्रिएका थिए। [तस्वीरमा जल्दै गरेको ताहाचलको म्यानपावर कार्यालय। यो तस्वीर खिच्दा आगोको रापले मेरो अनुहार र हात नराम्रोसित पोलेको थियो। यो कार्यालय जलेको केही छिनपछि कर्फ्यु लागेको थियो]
आज वैशाख ११। लोकतन्त्र दिवस। राजा ज्ञानेन्द्रले सात दल र माओवादीको आन्दोलनको माग अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेको दिन। तीन दिनमा यो दोस्रो शाही घोषणा थियो। राजाको पहिलो घोषणापछि आन्दोलन झन् चर्किएको थियो। कर्फ्यु तोड्दै प्रदर्शन हुन्थे। त्यस्तै एउटा कर्फ्यु तोडेर आएको जुलुसमा म पनि मिसिएको थिएँ। कालिमाटीमा पुग्दा त्यहाँ सेना तैनाथ… Continue reading
प्रम ओलीले प्रचण्ड जस्तै भनेर प्रशंसा गरेका सीके राउत एक जमानामा गेरुवस्त्र लाएर भगवान खोज्दै हिँडेका थिए
Posted on March 12, 2019 by Salokya
अहिले सीके राउत फेरि चर्चामा छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्ड जस्तै निर्णय क्षमता भएको भनेर प्रशंसा पनि गरे। यसरी प्रशंसा गर्दा मञ्चमा प्रचण्ड पनि सँगै थिए। प्रचण्डले बोल्ने मौका नै पाएनन्। आफूलाई पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका राउतसँग तुलना गरिएकोमा प्रचण्डलाई कस्तो लाग्यो होला सुन्न पाइएन। सिके राउतको बारेमा उनको आत्मकथाका… Continue reading
राष्ट्रपतिको सवारीमा भएको ‘विद्रोह’ले सम्झाएको राजा ज्ञानेन्द्रको १४ वर्ष पुरानो सवारी
मंगलबार राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा बाटो छेकिएका सवारी साधनहरुले विद्रोह गर्दै निषेध तोडेको भिडियो भाइरल भइरहँदा मलाई भने १४ वर्ष अघिको राजाको सवारीका क्रममा खिचेको भिडियोको याद आयो। त्यतिबेला अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन। न अहिले जस्तो तीव्र गतिको इन्टरनेट नै थियो। अहिले भए स्मार्टफोनबाटै भिडियो खिच्न सकिन्थ्यो। त्यतिबेला त्यो पनि थिएन। ३ मेगापिक्सेलको डिजिटल क्यामेराले… Continue reading